राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १० बर्षपछि बार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारीमा, लाभांश कहिले दिन्छ ? « Artha Path
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १० बर्षपछि बार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारीमा, लाभांश कहिले दिन्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १० बर्षको बार्षिक साधारण गर्ने तयारी गरेको छ । करिब १ दशकको वार्षिक साधारणसभा गर्न बाँकि रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले साधारण सभा बोलाउने तयारी गरेको हो ।
सबै सूचक बढ्दा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको खुद नाफा र खुद दाबी भुक्तानीमा गिरावट
जेठ महिनामा कम्पनीले ५ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवदेन बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०६८–०६९, आर्थिक बर्ष २०६९–०७०, आर्थिक बर्ष २०७०–०७१, आर्थिक बर्ष २०७१–०७२ र आर्थिक बर्ष २०७२–०७३ सम्मको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा पठाएको हो । त्यसपछि कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७३–०७४, आर्थिक बर्ष २०७४–०७५, आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ र २०७६–०७७ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
नेप्सेमा प्रतिकित्ता मूल्य धेरै भएको युनिलिभरलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १ नम्बरमा, प्रतिकित्ता मूल्य कति छ ?
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५ आर्थिक बर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागी पेश गर्यो